श्री लालीगुराँस सहकारीले पालेको ‘विचौलिया’ पत्रकार : ‘ठगी धन्दा’को समाचार रोक्न धम्की ! | Diyopost - ओझेलको खबर श्री लालीगुराँस सहकारीले पालेको ‘विचौलिया’ पत्रकार : ‘ठगी धन्दा’को समाचार रोक्न धम्की ! | Diyopost - ओझेलको खबर
Diyo post आइतबार, भाद्र २९, २०७६ | १७:०२:०२
काठमाडौं, २९ भदौ । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले दर्जनौँ व्यक्तिहरुलाई ठगि गरेको प्रमाण सहितको समाचार दियोपोस्ट डटकम लगायत केही सञ्चार माध्यमले प्रशारण गरिरहेको छ । ठगी, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कालो पर्दा खोल्नुपर्ने केही सञ्चारकर्मी पत्रकार भने ठगीधन्दाको समाचार रोक्न क्रियाशिल रहेको खबर छ ।
दियोपोस्ट डटकमले श्री लालीगुराँस सहकारी संस्थाबाट श्रङ्खलाबद्ध रुपमा भइरहेको ठगीधन्दाको समाचार प्रकाशन रोक्न एक पत्रकारको रहस्यमयी दौडधुप जारी छ ।
राजधानीबाट प्रकाशित हुने नेपाल समाचार पत्र दैनिकका बरिष्ठ सहायक सम्पादक रहेका इश्वरराज ढकाल समाचार रोक्न विभिन्न स्थानमा धाइ रहेका छन् ।
समाचार प्रकाशन भएपछि ढकालले आफ्नो मोबाइल नम्बर ९८५१०९****१ बाट दियोपोस्टको प्रधान सम्पादकलाई टेलिफोन गरेका थिए । टेलिफोनमा उनले प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई एक पटक भेट्न चाहेको बताएका थिए । तर, विश्वकर्माले आफूले भेट्न समय नभएको बताएपछि उनले ‘तपाईंले पहिले कहाँ काम गर्नु भएको ?’ भन्दै बायोडाटा सोधेका थिए ।
विश्वकर्माले आफूले काम गरेको मिडियाको नाम लिएका थिए ।
केहीबेरमै उनले काम गरेको संचार माध्यमका मालिक तथा बरिष्ठ पत्रकारले फोन गरेका थिए । तर, उक्त फोन समेत रेस्पोन्स नभएपछि ढकालले अन्यशक्ति केन्द्रलाई प्रयोग गरेका थिए ।
समाचार रोक्न विभिन्न ठाउँमा सम्पर्क गरेपनि दियोपोस्टमा समाचार नरोकिएपछि उनले अन्तिममा ‘भाई भन्न मिल्छ नी’भन्दै धम्कीपूर्ण अर्को फोन गरेका थिए ।
‘पत्रकारीताको नम्स छ । एक पटक सोध्यौ । शिक्षामन्त्रीलाई न्युज लेख्ने म मात्रै हो,’ ढकालले टेलिफोनमा भनेका छन्,‘मान्छेको चरित्र र नैतिकतासँग जोड्दा खेरिमा भविष्यमा के इफेक्ट पर्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।’
ढकालले लालीगुराँसको विषयमा लेखिएको समाचारका कारण कसैले झुन्डिएर मरे वा कसैले मुद्दा हाले भने के होला भन्दै धम्की दिएका थिए ।
‘बसेर गफ गरौँ कुरा गरौँ भनेका थियौँ । तर, तिमी बसेनौ । यत्तिकै चल्छु भनेर हुँदैन ।
पत्रकारीताको नम्स अनुसार चल्देउ । बसेर गफ गर्दा तिमी कन्भिन्स हुनसक्छौ की सक्दैनौकी,’ उनले भने,‘भरतपुरको चुनाव जस्तो तिमी एकातिर बस उनीहरु अर्को तिर बस्छन् । कसैको चरित्रसँग जोड्दा पछि के हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।’
ढकालले विवादास्पद सहकारीको हदैसम्म बचाउ गरे ।
‘लालीगुराँस सहकारी कहिल्यै सकिँदैन । उसले केही गल्ति गरेकै छैन । ठूलै गल्ती गरेको भए बेग्लै कुरा । कर्मचारी नियमावली हेर । सबै हेर्न सक्छौ । केशव पुरीको पेनाल्टी मिनाहा गर्न आइज भन्दा पनि नआएको हो,’ ढकालले सहकारीको बचाउ गर्दै भने,‘उसले हारेर सबै सकिएपछि तिमीहरुको शरण पर्न गएको हो । आज नोटिस आएको छ । फेरी भोली पनि आउनसक्ला ।’
उनले आफूले पर्दाखेरी पत्रकार बोलाइदिने र छलफल गराइदिने काम गर्दै आएको स्विकार गरे ।
‘पर्दादेरी पत्रकार बोलाइदिने हो । छलफल गराइदिने हो । चित्त नबुझेको काम बुझाइदिने हो । सुरेन्द्र सरसँग चिनजान भएका पत्रकार धेरै छन् । उहाँलाई पीरमर्का पर्दाखेरी कुरा गर्नुभएको हो,’ ढकालले भनेका छन्,‘बसेर छलफल गरौँ । तिमीलाई चित्त नबुझेका कुरा भन । एकलौटी रुपमा ठोक्नु हुँदैन । भाई बसौँ छलफल गरौँ केही विग्रनेवाला छैन ।’
उनले समाचारको विषयमा एक पटक भेट्न आग्रह गरेका थिए । तश्री लालीगुराँस सहकारीमा अर्बौंको हिनामिना र ऋण अपचलन रहेको समाचार नरोकिएपछि कान्तिपुर दैनिकमा लामो विज्ञप्ति नै छापिएको थियो ।
दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशीत समाचारलाई आधार मान्दै अन्य सञ्चार माध्यममा समेत समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरेपछि ढकाल विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार रोक्न र बार्गेनिङ गर्न पुगेका थिए । ऋषी धमलाद्वारा सञ्चालित प्राइम टाइम टेलिभिजनले त प्रोमो मात्रै डिलिट गरेन सहकारीका विवादित प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीकै मात्रै अन्तर्वार्ता बजायो ।
त्यस्तै ‘यो हो टेलिभिजनले त आफूले बजाएको लामो रिपोर्ट नै युटुभबाट डिलिट गरेको थियो । रिपोर्टिङमा गएका सञ्चारकर्मीका अनुसार सहकारीका विचौलिया पत्रकार ईश्वरराज ढकाल टेलिभिजन स्टुडीयोमै पुगेका थिए । यो हो टेलिभिजनका मालिकसँगको भेटपछि भएको बार्गेनिङपछि भिडियो नै डिलिट गरिएको थियो ।
ठगीधन्दा चलाउने यस्ता सहकारी तथा वित्तिय संस्थाहरुले ढकाल जस्ता पत्रकारहरुलाई प्रेस सल्लाहाकारको रुपमा भन्दा पनि ‘गलतधन्दा बारेको समाचार रोक्ने’ विचौलियाको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
ढकाल विवादास्पद सहकारीकै प्रेस सल्लाहाकार !
कुनै फर्म वा कम्पनिमा प्रेस सल्लाहाकार भएको व्यक्ति सञ्चारमाध्यममा क्रियाशिल हुन पाउने की नपाउने भन्ने बहस यतिबेला शुरु भएको छ ।
विवादास्पद श्री लालीगुराँस बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको प्रेस सल्लाहाकार पनि उनै ढकाल छन् । उनलाई प्रेस सल्लाहाकार राखिएको विषयमा सहकारीको वेभसाइटमै उल्लेख छ ।
विभिन्न वित्तिय संस्थामा भएका अनियमितता उठाउने अभियान घोषणा गरेको नेपाल समाचार पत्रमा ढकाल कार्यरत छन् । ढकालकै कारण श्री लालीगराँसको ठगीधन्दाको समाचार रोकीएको बताइन्छ ।
ढकाल कार्यरत नेपाल समाचार पत्र र राजधानी दैनिकमा गायक रामकृष्ण ढकाललाई ७ दिन भित्र कर्जा चुक्ता गर्न आउन भन्दै अर्को सुचना छापेको थियो । यता पीडित गायक रामकृष्ण ढकाल भने आफूलाई लालीगुराँस सहकारीले ठगी गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा छाइरहेका छन् ।
सहकारीको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा समाचार रोक्न क्रियाशिल ढकाल सहकारीका ऋणी समेत हुन् ।
हेटौंडा घर भएका पत्रकार ढकालले सहकारीबाट १५ प्रतिशत ब्याज र १६ प्रतिशत पेनाल्टीमा चार लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको स्टेटमेन्टमा देखिन्छ ।
प्रेस काउन्सिल नै विचौलीयाको कोपोभाजनमा !
पत्रकार विचौलियाहरुको प्रभाव निमायमक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालसम्म देखिएको छ । कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन वा स्पष्टिकरण गर्नुपरे सोही सञ्चार माध्यममा प्रमाणसहित खण्डन पठाउन सकिन्छ । तर, श्री लालीगुराँस सहकारीले भने सेटिङमै प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीलाई झुक्याएको पाइएको छ । २ दिनअगाडीको मितिमा खण्डन टाइप गराएर २ दिनपछि मात्रै दियोपोस्टको कार्यालयमा पठाएका थिए ।
सोही दिन काउन्सिलमा समेत उजुरी गरेका छन् । काउन्सिलमा दिएको उजुरीमा दियोपोस्टले प्रकाशन गरेको समाचारमा प्रमाण नभएको बताइएको छ । तर, उक्त सहकारी सम्बन्धीत प्रकाशित समाचारमा सबै प्रमाणहरु प्रकाशित भएको पाठकहरुलाई जगजाहेर नै छ ।
काउन्सिलले सोही दिन पठाएको अर्को एक समाचार सम्बधित पत्रमा खण्डन छाप्न भनिएको छ । तर, श्री लालीगुराँस सहकारीको केशमा भने खण्डन छाप्नु होइन सिधै ७ दिन भित्र जवाफ दिनु भन्ने निर्देशन छ । स्रोतका अनुसार काउन्सिलकै एक बोर्ड सदस्यको ठूलो दबाव थियो ।
आइतबार, भाद्र २९, २०७६ | १७:०२:०२